घरको कोठाभित्रै जलिरहेकी थिइन् श्रीमती, रक्सी पिउँदै बसिरहे श्रीमान् - Internet Khabar
Home World घरको कोठाभित्रै जलिरहेकी थिइन् श्रीमती, रक्सी पिउँदै बसिरहे श्रीमान्
घरको कोठाभित्रै जलिरहेकी थिइन् श्रीमती, रक्सी पिउँदै बसिरहे श्रीमान्
एजेन्सी। एक महिलाको आफ्नो घरको कोठामै आगोले जलेर मृत्यु भएको छ । ती महिलाले आफैं आगो लगाएको हो वा जलाइएको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन । प्रहरीले उनको हत्या हो वा आत्महत्या भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनका माइती पक्षले उनलाई यातना दिएर हत्या गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
महिला घरमै जलिरहेको खबर पाएर पुगेको प्रहरीले उनको शवलाई पोष्टमार्टमको लागि पठाएको छ । भारतको इन्दौर शहरनजिकै भएको यो घटनामा ती महिलाको मृत्यु भएपछि प्रहरीले उनका श्रीमानलाई खोज्दा उनी नजिकै रक्सीको ‘ठेका’मा रक्सी पिउँदै गरेको अवस्थामा भेटिएका छन् । प्रहरीले घरमा मृतक महिलाकी नन्दलाई भेट्टाएको थियो ।
नन्दले कोठाबाट धुवाँ निस्किरहेको र महिला चिच्याएको सुनेपछि अरुलाई बोलाएकी थिइन् । यहाँका जयसिंह ठाकुरकी बुहारी २४ वर्षकी रीना ठाकुरको मृत्यु भएको हो । युवतीका माइतीले दाइजोका कारण उनको जलाएर हत्या गरिएको आरोप लगाएका छन् । प्रहरीले महिलाका श्रीमान रवि ठाकुर, ससुरा जयसिंह, सासु सविता र नन्द कृतिकाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटनापछि परिवारका अन्य सबै फरार छन् । महिलाका श्रीमान् रविलाई भने प्रहरीले रक्सी पिउँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । महिलाका डेढ वर्षका छोरा सोनु पनि अभियुक्तहरुसँगै छन् ।
मृतक रिनाका पिता मोहनसिंह किसान हुन्। उनका अनुसार रीनाको विवाह ३ वर्ष पहिले भएको हो। उतिबेला हैसियतअनुसार दाइजो दिएको उनले बताए। ६ महिना पहिले रीनाले माइती आउँदा परिवारले १ लाख रुपैयाँ दाइजो मागेको बताएकी थिइन्। रीनाले आफ्ना माइतीले यति ठूलो रकम दिन नसक्ने बताउँदा शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरेको बताएकी थिइन्। बिहीबार रीनाले पिता मोहनसिंहलाई फोन गरेर आफूलाई पैसाको लागि यातना दिइएको भन्दै उनीहरुले आफूलाई मार्न पनि सक्छन् भनेको मोहनसिंहले बताएका छन्।
छोरीको फोनलगत्तै छोरीको घर जान हिँडेका मोहनसिंह छोरीको घर पुग्दा उनको मृत्यु भइसकेको र आफू पुग्दा घरभरी भीड जम्मा भएको बताउँछन् । त्यहाँ पुगेपछि मात्रै उनले छोरीको मृत्युबारे थाहा पाएका थिए । पिता मोहनसिंहले हत्याको आशंका गरेका छन् । जिउँदै आगो लगाएर आत्महत्या गरेको भए पीडाले उनी यताउता भाग्दा कोठामा अन्यत्र पनि जलेको हुनुपर्नेमा उनको शव जहाँ थियो त्यही ठाउँमा मात्र जलेको पाइएको भन्दै मोहनसिंहले रीनाको हत्या गरेको उनको लाश जलाइएको आशंका गरेका छन् ।
Previous articleलसुन र मह मिलाएर खानुहोस्, पाउनुहुनेछ चमत्कारीक फाइदा !
Next articleपहिलेपहिले खतरनाक घरेलु तरिकाले यसरी गरिन्थ्यो गर्भपतन
भारत र अमेरिकी गठबन्धनलाई विश्वमै पुनर्जीवित गर्ने घाेषणा
दुःखद खबरः विद्युतीय धरापमा परेर ३७ को मृत्यु, ६० घाइते!
कन्टेनरमा फेला परेका सवै मृतक भियतनामी भएको प्रहरीको विश्वास